Samsung Galaxy A70 na-enweta igwefoto abalị nke Galaxy S10 | Gam akporosis
Ngalaba foto bụ otu n'ime isi ihe mara mma nke ndị na-azụ ahịa, n'oge a na ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, n'eziokwu, ha na-atụle tupu ha azụta ama. Ndị na-emepụta ekwentị maara nke a, na, n'ihi nke ahụ, ha na-emeziwanye igwefoto nke ọdụ ha na ọtụtụ mmelite nwayọ nwayọ ma ọ bụ, ọzọ, wepụta igwe nwere modulu igwefoto ka mma karịa nke ndị bu ha ụzọ.
Samsung na-echebara nke a echiche nke ukwuu, ọ bụ ya mere na ọ na-etinye oge na mbọ iji chọpụta foto igwefoto nke smartphones ya na-ewere, yana ịnye ike na-abawanye, uru ka mma na ndị a na ụdị ọ bụla ọ bụla. Ihe akaebe nke a bụ ihe ị na-eme na Galaxy A70, nke bụ inye gị ngwanrọ ngwanrọ na Igwefoto abalị nke Galaxy S10, n'ihi ya, onye a ga-ewere foto ka mma n'ọnọdụ ọkụ dị ala, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ọma, na tiori, dịka ọkọlọtọ.
Dị ka XDA-Developers portal na-agwa anyị, mmelite na-abawanye nọmba ụlọ na A705GMDDU3ASG6Ọ dị 367 MB n'ogo ma gụnyekwa ihe ncheta July tinyere ọtụtụ ndozi ahụhụ. Ọzọkwa, ị kwesịrị ị mejuputa obere ndozi na ndozi ndị ọzọ na sistemụ ahụ, mana edeghị nke a na ndekọ mgbanwe maka ngwugwu ngwa ngwa ọhụrụ ahụ.
Galaxy A70 melite igwefoto abalị Galaxy S10
El Galaxy S10 bụ ngwaọrụ mbụ iji nweta ọnọdụ abalị raara onwe ya nye. Ọ bụ ihe nnọchibido maka Bright Night, nke na-agbagwoju anya, nke na-ekweghị ka ndị ọrụ jiri aka ha gbanwee ọnọdụ ahụ kama ịdabere na algorithms ịchọpụta ihe iji kpebie mgbe ọ kwesịrị ịmalite.
E mechara gbasaa mode na ụdị ndị ọzọ, gụnyere Galaxy S9, 9 Galaxy Note y Galaxy A50. Galaxy A70 bu ihe ohuru kwesiri ka oru a, ya mere ndi oru gha enwe obi uto ugbua, obu ezie na, ka odi ugbua, obu ndi India, ebe o nwebeghi ya na mpaghara ndi ozo. N’ime awa ma ọ bụ ụbọchị ole na ole anyị ga - enweta ozi na mmelite ahụ erutela ebe ndị ọzọ, o yikarịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy A70 na-enweta igwefoto abalị nke Galaxy S10 na mmelite ọhụrụ ya
Samsung na-anọgide na Apple dara n'elu ahịa ụwa
Google Pay ga-enwe ihu ihu na ọnọdụ incognito